Nezvedu | Kylin Kugadzira
Kubva 1995, seyakagadziriswa marezinesi, akananga uye ane hunyanzvi muChina, Kylin Manufactory yave imwe yemakambani anotungamira muindasitiri. OEM / ODM mugadziri uye mutengesi anonyanya kugadzira zvigadzirwa zvemabhodhi, mitambo yemakadhi, makadhi ekutamba, zvemitambo, velvet art poster, ekupakira bhokisi uye nezvimwe zvinhu. Isu tinomhanya mafekitori mana ekugadzira anosanganisira; kudhinda, huni, mari nemari.
Isu tinobatira pamwe neanopfuura gumi mutambo zvikamu zvehunyanzvi mafekitori ekugadzira uye kutumira kunze kwakatenderedza miriyoni imwe zvidimbu zvemitambo zvigadzirwa pagore. Isu tine ruzivo rwevashandi, epasi rese zvishandiso uye zvakagadzirirwa masevhisi kubatsira vatengi vedu kuwana sevhisi izere yekugadzira bhodhi nemitambo yemakadhi pakati pevamwe vakawanda.Zvose zvishandiso zvedu ndezvimwe zvakanakisa zvepasi rese kuvimbisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Makomputa edu epamusoro-soro, epamberi pekudhindisa michina nemichina yekudhinda inovandudzwa nguva nenguva kuti ifambire nehunyanzvi hwazvino muindasitiri yekudhinda nekupakira kuitira kuti tigone kuve nechokwadi chekuti tinongogadzira basa remhando yepamusoro.
Dhipatimendi redu reKutora mafirimu rakagadzirirwa otomatiki ndiro processor, furemu yekuratidzira, firimu yekubata purinda, firimu punchi, uye PS ndiro punch. Tine zvese post-yekudhinda michina senge bhuku rekutsikirira muchina, kadhi bhodhi laminator, creasing uye yekucheka michina, otomatiki kufa yekucheka michina, gluing michina, simba kona kona yekucheka michina, PP Laminator, UV oiri-achipfuura kupukuta michina miviri, varnishing michina, nezvimwe .Purasitiki fekitori yedu ine 10 jekiseni michina ine akawanda akasiyana masimba. Tine dhipatimendi reOEM rine mahunyanzvi ehunyanzvi ekugadzirwa kwechigadzirwa pamwe neyedu yekuprinta nekupfira nzvimbo munzvimbo.
Mamwe masevhisi anoenderana atinogona kupa anosanganisira kugadzira kuseka-kumusoro, kudhirowa kwehunyanzvi, mafaira e3D uye jekiseni Kune zvinopfuura mazana mashanu zviripo jekiseni anoumba mumusangano wedu kuburitsa angangoita ese marudzi emitambo zvidimbu zvine chekuita neindasitiri yemutambo. Isu tinogadzira mukugadzira backgammon, roulette uye yavo accessories. Tsika yepurasitiki, huni uye zvigadzirwa zvesimbi zviripo nekuda kweruzivo rwedu rwakakura muindasitiri yeplastiki jekiseni inoumba, kufa- kukanda, kufema kuumba, slush inoumba, dhizaini inogadzira, acrylic yekugadzira, kupisa kupisa kudhinda, silkscreen, kudhinda kwepadhi, kupisa kutsika , Vacuum yakanamirwa pamifananidzo uye zvakawanda.
Tinotenda kuti kubudirira kutaurirana pakati pevagadziri nevatengi kunoenderana nekuvimbika uye kutendeseka. Kunyatsotevedzera mutemo uyu kunotibvumidza kuti tigare tichisangana uye kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu. Zvinoitawo kuti vatengi vedu vadzoke zvimwe.
Yedu yakasarudzika mukana ndeyechokwadi uye yakanangana nemitengo yeChinese, zvigadzirwa zvakanaka uye zvakachengeteka, kutaurirana kwakasarudzika uye basa rakakura uye nenguva yekuendesa.
Kylin Manufactory unogamuchira nemutsa vatengi vekare nevekare, vemukati uye vekunze vatengi kuti vashanyire nekutarisa kambani yedu.
Nhungamiro yedu yekutungamira iri kupa kuvimba, kuvimbika, kushandira pamwe uye kurapa kwakaringana kune vese vatengi nekuve kambani yakanaka muminda yedu yehunyanzvi yekugadzira. Isu tinozvipira isu kuenderera kunatsiridza mune edu maitiro, zvigadzirwa uye masevhisi.